သဒ္ဓါလှိုင်း: ၂၀၀၉ ကုန်လို့ ၂၀၁၀ ကိုတောင် ၀င်လာပေါ့…
၂၀၀၉ ကုန်လို့ ၂၀၁၀ ကိုတောင် ၀င်လာပေါ့…
၂၀၀၉ ကုန်ပြီး ၂၀၁၀ တောင် ၀င်လာတော့ မှာပါလား...... ၂၀၀၉ကို ဘာနဲ့နှုတ်ဆက် မလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်တော့ ဘာအဖြေမှ ထွက်မလာဘူး။ ၂၀၁၀ ကိုရော ဘာနဲ့ကြိုဆိုရမလဲ………..
၂၀၀၉ မှာ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ် ကြည့်တယ်။ ၂၀၀၉ မှာ ၀မ်းသာစရာတွေ၊ ၀မ်းနည်းစရာတွေ အများကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ ရတယ်။ ဝေးကွာနေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အကို အကြီးဆုံး ကို ပြန်တွေ့လိုက် ရလို့ အရမ်း ၀မ်းသာခဲ့ရတယ်။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ဖေကြီးနဲ့မေကြီး ပြီးတော့ ညီမလေးနဲ့ ဝေးကွာ ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မ ဘ၀ အတွက်တော့ အကြီးမားဆုံး ၀မ်းနည်းမှု ပဲပေါ့။ ဘယ်တော့ ပြန်ဆုံနိုင်ကြမလဲ လို့ စဉ်းစားရင်း နေ့ပေါင်း များစွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ ရတယ်။
ကျွန်မ အတွက်တော့ အရမ်းကြာ သလိုပဲ ခံစား နေရတယ်။ မိဘတွေ နဲ့တော့ ဝေးကွာခြင်း ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို ပထမဆုံး… ကြုံတွေ့လိုက် ရတာပေါ့။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲ မွန်းကျပ်လာရင် ရေးဖို့ ဘလော့လေး တခု လုပ်ဖြစ်တယ်။ ကုသိုလ် ကောင်းမှုကတော့ နေ့စဉ် ဘုရားရှီခိုးတာပဲ ရှိတယ်။ တခြားသူ အားလုံးကို မေတ္တာနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သည်းခံစရာ ရှိရင် အစွမ်းကုန် သည်းခံ နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ တခြား ချို့တဲ့သူ တွေကို..... ကူညီနိုင်ဖို့ စိတ်ထဲ ရှိသလို မဖြစ်ခဲ့ သေးဘူး။ အကျဉ်းထောင် အသီးသီး ထဲက နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက် ကြောင့် ဘ၀ တွေကို ပေးဆပ် နေကြတဲ့ အကျဉ်းကျ ရဲဘော်တွေ ကို မေ့မရခဲ့ဘူး။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်း သတိရ စိတ်နဲ့ လွမ်းနေရတုန်း ပေါ့။ ဘယ်အချိန်လောက် အထိ လွမ်းနေရ အုံးမယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှခန့်မှန်းလို့မရ ပါဘူးလေ………. အဲလို ဆိုတော့ အလွမ်း တွေနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက် လိုက်ပါတယ် ၂၀၀၉ရေ………….
၂၀၁၀ ကိုတော့ ရောက်လာခဲ့ပြီ။ မထူးခြားတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တွေကိုပဲ လုပ်နေရမယ် ထင်တယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကလည်း ဘယ်အချိန်မှန်း မသိသေးတော့……`၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ´ တုန်းကလိုပဲ ပြီးသွားမှာလား…… ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ကြီး စစ်ကျွန်အောက် မှာ ပြားပြား ၀ပ်နေရအုံး မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေ အားလုံး မကြောက်မရွံ့ … ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် ရင်ဆိုင်ပြီး အံတု နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် တမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲ သွားနိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်တယ်လေ....
အဲဒီအခါမှာ ကျမ အနေနဲ့ နှမ်းတစေ့ အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိ ပါတယ်… ဒါမှလည်း အကျဉ်းထောင် ထဲမှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ သူတွေ အတွက် မျှော်လင့်ခြင်း ဆိုတာ ဖြစ်လာ မှာပေါ့။ ၂၀၁၀ မှာ မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ အနာဂတ် အလင်းရောင် တွေနဲ့ ရောင်နီ ထွန်းလင်းလာမဲ့ အချိန် ကိုမျှော်လင့်ရင်း… ၂၀၁၀ကို နွေးထွေးစွာနဲ့ ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေတော့………….
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက် မေတ္တာ ပို့သ လိုက်ပါတယ်........
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:07 AM
ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ကြီး စစ်ကျွန်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်နေရအုံးမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံး မကြောက်မရွံ့ …ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် ရင်ဆိုင်ပြီး အံတုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်လေ.... အဲဒီအခါမှာ ကျမအနေနဲ့ နှမ်းတစေ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်… ဒါမှလည်း အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့သူတွေ အတွက်မျှော်လင့်ခြင်း ဆိုတာဖြစ်လာမှာပေါ့။ ၂၀၁၀ မှာ မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ အနာဂတ် အလင်းရောင်တွေနဲ့ ရောင်နီထွန်းလင်းလာမဲ့ အချိန်ကိုမျှော်လင့်ရင်း… ၂၀၁၀ကို နွေးထွေးစွာနဲ့ ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေတော့
Happy New Year ပါ..
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် `ကိုကိုကြီး´ ရဲ့မေ...